China COLOR PVC VINYL စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ထားဝယ်
item Code ကို: AD-V025
အမည်: အရောင် PVC ဗီနိုင်း
ပေါင်းစပ်: 100um PVC + 140g ဖြန့်ချိစက္ကူ
လျှောက်လွှာ: Light Box, ပြတင်းပေါက်
အထူရုပ်ရှင်ကား ၀.၁ မီလီမီတာ
စက္ကူဖြန့်ဝေ 120gsm, 140gsm
အပြင်ဘက်တွင်တာရှည်ခံသည် 1-2yeas, 3-5years
အင်္ဂါရပ်များ ယာဉ်၊ အဆောက်အ ဦး၊ ဘတ်စ်ကား၊ မက်ထရို၊ ယာဉ် ၀ င်းဒိုး (သို့) ဖန်နံရံအလှဆင်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ plotter ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်စာလုံး၊ လိုဂိုနှင့်အထူးပုံသဏ္graphicာန်ပုံကိုမဆိုအလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ကော်မပါဘဲကြွေပြားကြွေပြားများပြproblemနာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာ ၁။ မိုးလုံလေလုံ / ပြင်ပရှိ sign2 များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ယာယီမြှင့်တင်ရေးနှင့်အရောင်းကြော်ငြာကြော်ငြာ။
4. Acrylic စာရွက်, light box, ကွန်ပျူတာဖြတ်တောက်ခြင်း။ ရောင်စုံအက္ခရာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်အလှဆင်။
ဗီနိုင်းအဆင့် A ကိုဖြတ်တောက်သောအရောင်
1.facefilm: 100 micron PVC ရုပ်ရှင်
2.transparent အမြဲတမ်း acrylic အခြေခံပြီးကော်
1.facefilm: 80 micron PVC ရုပ်ရှင်
3. တောက်ပသို့မဟုတ် Matte ပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည်
၅။ မည်သည့်စာလုံး၊ လိုဂိုသို့မဟုတ်အထူးပုံသဏ္intoာန်ကိုဖြတ်တောက်ရန်လွယ်ကူသည်
ရှေ့သို့ အရောင် PVC ဗီနိုင်း - စီးပွားရေး
SUPER GLOSSY အတွင်းပိုင်း PVC ဗီနိုင်း - ဖယ်ရှားနိုင်သည်
ရောင်ပြန်ဟပ် PVC ဗီနိုင်း
အရောင် PVC ဗီနိုင်း - စီးပွားရေး